Unokufuna iNgcali yeNtengiso ye-imeyile ukuba ...
Esi sithuba senzelwe ukuba sisixhobo kwabo bavumayo ukuba bayazi ukuba banokufumana ixabiso elingaphezulu kwitshaneli ye-imeyile. Nokuba kwenzeka ntoni ukuthatha isigqibo sokuqesha iingcali zangaphandle, ezinje nge iarhente yentengiso ye-imeyile, okanye ngaphakathi kwetalente; Esi sikhokelo siza kukunceda ukuba uvavanye kwaye uphinde uphonononge iinzame zakho zangoku zokuthengisa nge-imeyile.
Makhe sijonge kumanani
I-imeyile ibisisigxina sentengiso iminyaka elishumi, kwaye akunakulindeleka ukuba itshintshe kwikamva elikufutshane. Ivumela ukujolisa kuba kuqhutywa yidatha. Iqhuba ukuthengisa ngokuthe ngqo. Kwakha ubudlelwane, ukuthembeka kunye nokuthembana. Ikwaxhasa ukuthengiswa ngezinye iindlela ezizodwa:
Ngokutsho Umbutho weNtengiso ngqo, ukuthengisa nge-imeyile kuvelise i-ROI ye- $ 43.62 kuyo yonke idola echithwe kuyo, iphindwe kabini eyokuqala imbaleki.
Isishwankathelo ngu UkuthengisaSherpa ithi, Abo babona ukusebenza kweenkqubo zabo ze-imeyile zincipha banamathuba amaninzi okuba nemibono emifutshane yombutho kwiqhinga. Imibutho eneembono ezijolise kutyalo-mali kwi-imeyile zivuna umvuzo.
The Ibhunga leCMOIngxelo yeNtengiso ye-Outlook '08 iphonononge izicwangciso kunye nezimvo zabathengisi abangama-650. Ukuthengisa nge-imeyile yayiyeyona ndawo kujoliswe kuyo kutyalo-mali.
Kuvavanyo lwabathengisi, Ivenkile.org wathi "i-imeyile yeyona ndlela ikhankanyiweyo iyimpumelelo".
Ukuphatha ukuthengisa nge-imeyile ngaphakathi endlwini?
Ukuba awunabudlelwane obukhoyo be-arhente okanye unetalente eyaneleyo endlwini, cinga ngoku:
Wena (kuthetha ukuba wena okanye iqela lakho) niyalazi ishishini lakho; Ngaba uyazi kakuhle ukuthengisa nge-imeyile?
Ukuba ewe, unayo ixesha kunye namandla okwenza iinzame?
Ngaba ukuthengisa okuhlangeneyo kunye neCRM kuthelekiswa njani nabantu abakhuphisana nabo?
Ngaba ukuthengisa nge-imeyile kuqhuba ukuthengisa, ukwakha ukuthembeka, kunye nokunciphisa iindleko zokuthengisa?
Ngaba inkqubo yakho ye-imeyile isekwe kuphando kunye / okanye kwidatha yembali?
Ngaba umsebenzi wakho wasendlini uyakonga okanye ukuhlawula imali?
Ukuba sele unayo iarhente yentengiso okanye olunye uncedo lwangaphandle, zibuze:
Ngaba bagxile kwi-imeyile okanye ngaba kunjalo inkonzo epheleleyo?
Ngaba bayayivelisa i-ROI ehambelana neziphumo ezingentla?
Ngaba bacinga ngathi ngaphandle kokuqhutywa?
Ngaba bayayiqonda imakethi yethu ekujoliswe kuyo kunye neenkqubo zeshishini?
Ngaba baphonononge kwaye benza imali ngazo zonke iindlela onokukhetha kuzo?
Ngaba umsebenzi wabo wintsha, uyonwabisa kwaye ubonakalisa ezona ndlela zilungileyo?
Amacandelo e-imeyile yokuThengisa i-imeyile
Ukuthengisa nge-imeyile kunokubandakanya ukufunyanwa kwabathengi, ukukhulisa okukhokelayo, ukuvuselelwa kwabaxhasi kunye nokugcinwa, kwaye ngokuqinisekileyo ukuthengisa ngokuthe ngqo, oko kuthetha ukuba uninzi lweenkqubo kunye neenkonzo zinokuthi zibandakanyeke, kubandakanya:
Khuphela ukuBhala noPhuhliso loMxholo
Uyilo kunye nekhowudi
Uluhlu lokukhula kunye nolwakhiwo loLuntu
Uluhlu lwesahlulo kunye noPhuculo lohlu
Ukuziphatha kunye nokuThengiswa kwabaThengi
Ukuhanjiswa koMyalezo kunye noHlolo lokuHanjiswa
Umdibaniso womjelo onqamlezileyo
Umboneleli ngeNkonzo ye-imeyile (i-ESP) okanye uVavanyo lweSisombululo seNdlu ngaphakathi
Khokela ukukhulisa kunye ngqo / phezulu / ukuThengisa okuPhambeneyo
Ukuvavanywa kweMultivariate kunye nokuSebenza kweNkqubo
Ukuba olu luhlu lungentla lubandakanya ngaphezulu kunokwenza, oku kunokuba sisalathiso esomeleleyo sokusebenzisa eli jelo linengeniso. Mhlawumbi lixesha leqabane lokuthengisa elitsha okanye mhlawumbi kuya kufuneka uphinde uhambise uhlahlo-lwabiwo mali kunye / okanye unike iqela lakho elingaphakathi endlwini uqeqesho ngakumbi?
Ukuba (ngokusemthethweni) uzimisele ukuba ufuna uncedo, hlala ubukele. Kwisavenge sesibini nesokugqibela siza kuthetha ngendlela yokufumana kunye nokuvavanya italente efanelekileyo ehambelana neemfuno zakho ezizodwa kwaye ihlangabezana nemida yakho yohlahlo-lwabiwo mali.
tags: ibhunga le-cmoukudityaniswa kwekramUmbutho othe ngqo wokubambisaimeyile kunye neevenkileimeyile crmukuhlanganiswa kwe-imeyileemail MarketingIarhente yokuthengisa nge-imeyileingcali yokuthengisa nge-imeyileimbuyekezo yentengiso ye-imeyile kutyalo-maliUkulungiswa kwe-imeyileimeyile roiUkuthengisaSherpaIvenkileivenkile.org
Umboniso oBanzi we-HTML 5
NgoJanuwari 8, 2010 ngo-3:10 PM
Scott - esi sesona sithuba sam endisithandayo ukuza kuthi ga ngoku. Ingcebiso eyoyikekayo! Iinkampani ezininzi ke ziyasokola ngezixhobo ezinazo kwaye azifikeleli kwisakhono sazo. Kulapho ukusebenzisana neengcali kuhlala kusisigqibo esihle!
NgoJanuwari 8, 2010 ngo-3:41 PM
Enkosi Doug! Kwinxalenye yesibini ndiza kuchaza imigaqo eyi-8 ekhokelayo ekuqeshweni ingcali yokuthengisa i-imeyile.